फेवा तालको सीमांकन गरिँदै, तालको जग्गा दर्ता गर्न न्यायमूर्ति पनि संलग्‍न ! - २८ कार्तिक २०७७, NepalTimes
फेवा तालको सीमांकन गरिँदै, तालको जग्गा दर्ता गर्न न्यायमूर्ति पनि संलग्‍न !
पोखरा: फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकाले गठन गरेको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले काम थालेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फैसला अनुसार ताल सीमांकनको जिम्मेवारी संघ सरकारको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वाेच्चले उक्त कार्यका लागि गरेको आदेश अनुसार प्रम कार्यालयले अख्तियारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद र उक्त मन्त्रालयले पौडेल संयोजकत्वमा ताल सीमांकन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत र वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिको औपचारिक बैठकअघि संवाददाताहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारणपछि मालपोत ऐन प्रयोग गरी जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको सुनाइन् । उनले प्रतिवेदनको नाममा प्रतिवेदन दिने गरी नभई र फेरि समिति बनाउन नपर्ने गरी काम गर्न पौडेल संयोजकत्वको समितिलाई निर्देशन दिइन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा केही विषय प्रष्ट हुनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले फैसला कार्यान्वयनमा केही ढिला भएको हो ।’
पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले आफूहरुले ७ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसैका केही कमजोरी सच्च्याएर अघि बढ्न सकिने बिचार राखे । ‘बर्खायाममा हुने तालको किनारा नै तालको सीमा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैमा हाम्रो जोड छ ।’ अहिले समाधान नभए फेवातालको समस्या कहिल्यै समाधान नहुने पनि उनले बताए । तालको जग्गा दुषित दर्तामा विज्ञ र विशेषज्ञसम्म संलग्न भएको उनको आरोप छ । ‘न्यायमूर्ति पनि संलग्न छन्,’ उनले भने ।,यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।